izinto zokwakha ubunjiniyela Imboni | China izinto zokwakha zobunjiniyela Abakhiqizi, abahlinzeki
Class 1 ikilasi 0 izinto zenjoloba zokufaka ipulasitiki
Ukusebenza okungangenwa komlilo kwemikhiqizo yenjoloba kanye nepulasitiki enombala weClass B1 kuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zekilasi elinokutsha B1 nangaphezulu okushiwo ku-GB 8627 "Indlela Yokuhlukanisa Umsebenzi Wokuhlanganiswa Kwezinto Zokwakha". Hlakulela ifomula yokuvikela imvelo eyingqayizivele, okokusebenza esimweni somlilo, ukuhlushwa kwentuthu kuncane, lapho amandla omlilo engeke akhiqize intuthu yomzimba womuntu.
ikhoyili yensimbi ephikisana nomunwe yamaphepha wokufulela
Amaphesenti angama-55% AL-ZN ASEBENZIWE NGOKUKHULULEKILE iyi-substrate yensimbi embozwe ezinhlangothini zombili nge-aluminium-zinc alloy enokwakheka kwengubo, i-55% aluminium, i-43.4% zinc ne-1.6% silicon. Ukumelana okuhle kakhulu kokugqwala kwe-Aluzinc kungumphumela wezinto zezinto ezimbili zensimbi: umphumela wokuvimbela i-aluminium ekhona ebusweni be-coating nokuvikelwa komhlatshelo kwe-zinc.
ikhoyili yensimbi ebandayo ebandayo ebandayo igoqiwe insimbi eqinile
OBANDAYO iphethwe STEEL ikhoyili ikhiqizwa ngokufaka ikhoyili esongwe ngokushisayo bese uyigingqa ngokufanayo ezingeni lokushisa elilinganiselwe libe wugqinsi olucekeceke. Inokumiswa okuhle kakhulu kwendawo nezinto ezinhle kakhulu zomshini zokusetshenziswa ekukhiqizweni kwezimoto nogesi.